Manohana Ilay ‘Mpitandro Filaminana Mandihy’ Ny Indoneziana Mpampiasa Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Avrily 2011 15:21 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, srpski, বাংলা, македонски, Español, English
Ny brigadier kilasy voalohany Norman Kamaru, mpitandro filaminana tanora any amin'ny tanànan'i Gorontalo any Indonezia izao no resabe ao amin'ny aterineto sy media taorian'ny nisian'ireo fankasitrahana mihoatra ny iray tapitrisa ny lahatsariny mandihy irery ao amin'ny YouTube .
Ao anatin'ilay lahatsary, hita mandihy sy manaraka amin'ny molotra ny feon-kiran'ilay hira Indiana Chaiya Chaiya eo am-panatanterahana ny asany i Norman.
Ireo manampahefana ao amin'ny polisy izay namerina nijery ilay lahatsary dia nanapa-kevitra ny hanome sazy malefaka an'i Norman satria teo am-pantanterahana ny asany izy no nanao izany fihetsika izany . Kanefa ireo mponin'ny aterineto izay afa-boly tamin'ny lahatsary mampihomehin'i Norman dia nanambara faingana ny fanohanan'izy ireo tao anatin'ireo bilaogy sy ireo vohikalan'ny media sosialy hafa.
Nisy tari-kevitra noforonina tao amin'ny vohikala Kaskus manontany ireo mpamaky raha mendrika ny ho saziana i Norman. Ny lohatenin'ilay tari-kevitra dia “Briptu Norman Kamaru pantasnya dihukum atau tidak?” (Brigadier kilasy voalohany Norman Kamaru, mendrika ny ho voasazy izy sa tsia?).
Mampifandrohy ireo pejy Facebook samy hafa ny mpitoraka bilaogy Ikada mba hanohanana an'i Norman. Ohatra: “1 juta dukungan buat oman kamaru untuk tidak ditindak” (Fanohanana iray tapitrisa ho an'i Norman Kamaru mba tsy ho voasazy izy); “Melepas rasa jenuh bersama Briptu Norman” (Manehoa fanohanana an'i Norman); ary “Dukung Briptu Norman Kamaru: BERJOGET ADALAH HAK SETIAP WARGA NEGARA” (Tohano ny Brigadier kilasy voalohany Norman Kamaru: ZON'NY OLOM-PIRENENA TSIRAIRAY NY MANDIHY).
Efa nahazo fanasana maro hipoitra amin'ny fahitalavitra i Norman. Na eo aza ny sazy malefaka izay homen'ny polisy an'i Norman, nanome alàlana an'i Norman hipoitra amin'ny fandaharan'ny fahitalavitra ny lehiben'ny Polisim-pirenena.
Ity misy fanambarana mahaliana avy amin'ny Baby D Library maneho ny fanohanany ny ‘mpitandro filaminana mandihy’ ary mangataka ireo manam-pahefana hanao an'i Norman ho sary famantarana ny ‘mpitandro filaminana mahafinaritra':
Raha mankasitraka azy ianareo nefa mbola manome sazy azy ihany, mbola tsy dia mety loatra. Raha izaho ianareo, aleoko misafidy azo ho sary famantarana ny “mpitandro filaminana mahafinaritra”. Mety ho izy no ilay mpitandro filaminana izay omen-kaja sy tian'ny fiaraha-monina. Tsy mpanao hatsikana manala baraka ny fiasanareo izy. Nefa A/toa, raha mbola mihizingizina ihany ianareo fa tokony ho henjana sy hanaraka fitsipika tahaka ny taloha ny mpitandro filaminana, raha izany dia ataovy. Hatahotra anareo hatrany ny vahoaka, fa tsy hanaja anareo.
Nanampy i Syaifuddin :
Ny fihetsik'i Norman dia nampiharihary fa tsy masiaka tahaka ny akanjo izay anaovany ny polisy. Mila endrika maha-te-ho-tia tahaka izany ny eo anivon'ny polisy, ary raha matsilo saina ny polisy, afaka nampiasaina hahatsara jery ny polisy izany.